musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Princess Cruises Emerald Chikepe Kudzokera Kumakungwa Makuru
Emerald Princess yakarongerwa kusvika kuFt. Lauderdale musi waGumiguru 30, 2021, uye achafamba nechikepe akateedzana mazuva gumi ePanama Canal cruises, kutenderera kubva kuFt. Lauderdale kusvika Zvita 10.
Princess Cruises nhasi yaratidza kudzoka kusevhisi yechikepe chechitatu chechikepe muUS - Emerald Princess - ichibva kuPort of Los Angeles munzira yePanama Canal yemazuva gumi kuenda kuFt. Lauderdale. Yekutanga chaiyo Emerald Princess vashanyi vakagamuchirwa pabhodhi nevashandi vane yakasarudzika ribhoni yekucheka mhemberero.
"Princess anga ari chikamu chezviyeuchidzo zvakakosha kwatiri," akadaro Chris naKathleen Lennon weMonument, CO, vekutanga Emerald Princess vashanyi kukwira ngarava. “Urwu rwendo rwedu rwe20 uye inguva yedu yechitatu kukwira Emerald Princess, uye mufaro watakanzwa patakasvika nhasi wanga uchikunda. Zvinonzwa sekuda kudzoka kumba. ”
Emerald Princess inopa MedallionClass zororo, ichiendesa iyo yekupedzisira mukusaita, munhu akasarudzika rwendo. Iyo Medallion inguva yechina-yakakura, inopfekedzwa chishandiso inogonesa zvese kubva pakubata-isina bhodhi kuenda kunotsvaga vadiwa chero papi pacho muchikepe, pamwe nebasa rakakwidziridzwa senge kuva nechero vashanyi vanoda, vanounzwa vakananga kwavari, chero ivo vari muchikepe. Yakave ichizivikanwa seyakanyanya kupfeka chishandiso mumhepo yepasirese yekugamuchira vaenzi.
Princess Cruises kufamba mungarava muEmerald Princess kunowanikwa kune vashanyi vakagamuchira dosi yavo yekupedzisira yevhavha yakabvumidzwa yeECVID-19 mazuva gumi nemana isati yatanga rwendo uye vane humbowo hwekubaiwa. Vese vakabaiwa vachena zvizere vanofanirwa zvakare kuburitsa yakaipa, yekurapa-yakacherechedzwa COVID-14 bvunzo (PCR kana antigen) yakatorwa mukati memazuva maviri ekutanga kwavo kwese kwePrincess kufamba. Majekiseni ejekiseni anoenderana neCDC nhungamiro.